चीनमा दुई ठूला भूकम्प : तीनको मृत्यु, ३३ घाइते
30 दिन पहिले
एजेन्सी। चीनको दक्षिणपश्चिमी युनान प्रान्तमा बिहान ९:४८ बजे गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट तीनजनाको मृत्यु भएको छ भने २८ जना घाइते भएका छन्। सो भूकम्पमा १९२ घरमा क्षति पुगेको र २० हजारभन्दा बढीलाई अन्यत्र सारिएको बताइएको छ। केही घन्टापछि उत्तरपश्चिमी किन्घाई प्रान्तमा त्गएको ७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट पाँचजना सामान्य घाइते भएको र पुल तथा सडकमा क्षति पुगेको बताइएको छ।
इन्डोनेसियामा बुधबार शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । देशको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने मालुकु प्रान्तमा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको हो । भूकम्प गएपछि सुनामीको खतरा भने नरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । भूकम्पले गरेको क्षतिका बारेमा पनि कुनै विवरण प्राप्त नभएको जनाइएको छ । स्थानीय समय अनुसार बुधबार बिहान ११:४३ मा भूकम्प गएको थियो । भूकम्पले पारेको असरका बारेमा विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । इन्डोनेसियामा बर्सेनि दर्जनौं पटक भूकम्प आउने र ठूलो धनजनको क्षति ह
लमजुङ भूकम्प (अपडेट) - घाइते सबै उपचारपछि घर फर्किए, ३० घरमा क्षति
लमजुङ – लमजुङमा बुधवार बिहान गएको भूकम्पका कारण घाइते भएका ६ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । लमजुङको भुलभुले केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पका कारण घर भत्किँदा बेसीसहर नगरपालिका ६ की उमा गुरुङ, वडा नम्बर ११ की खवकुमारी पाण्डे, दोर्दी गाउँपालिका ७ की मंगलीमाया तामाङ घाइते भएका थिए । यस्तै भाग्ने क्रममा मर्स्याङ्दी गाउँपालिका ६ का गोविन्द अधिकारी, बेसीसहर नगरपालिका ८ की खुसीमाया गुरुङ र वडा नम्बर ८ कै सुमित्रादेवी श्रेष्ठ घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।भूकम्पका कारण लमजुङका ३० घरमा क्षति पुगेको र...
लमजुङमा फेरि ५.३ म्याग्निच्यूडको भूकम्प
लमजुङ / मंगलबार दोस्रो पटक लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका ८ बजेर २६ मिनेट जाँदा ५.३ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको
भुलभुले केन्द्र भएर फेरि गयो ५.३ म्याग्‍निच्युटको भूकम्प
काठमाडौं। लमजुङको भुलभुलेमा दोस्रो भूकम्प गएको छ। बुधबार बिहान ८ बजेर २६ मिनेटमा ५.३ म्याग्‍निच्युटको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। बिहान सोही ठाउँमा ५.८ म्याग्निच्युटको भूकम्प जाँदा एक दर्जन बढी घरमा क्षति भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन्।
मंगलग्रहमा दुईवटा ठूला भूकम्प रेकर्ड
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा)को इन्साइट ल्यान्डरले मंगलग्रहमा दुईवटा ठूला भूकम्प रेकर्ड गरेको छ
इरानमा ५.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प, ४० भन्दा बढी घाइते
एजेन्सी । इरानमा शक्तिशाली भूकम्प आएको छ । भूकम्पमा परी कम्तीमा ४० जना घाइते भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।देशको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने सिसाख्त सहरलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ५.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प आएको समाचारमा जनाइएको छ । भूकम्पका कारण भौतिक संरचनाहरुमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । घर तथा भवनहरु, सडकलगायतका संरचनाहरु भत्किएका छन् भने विद्युत, सञ्चार... The post इरानमा ५.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प, ४० भन्दा बढी घाइते appeared first on Purbeli News.
Purbeli News माघ २०७७
जापानमा ७.१ रेक्टर स्केलको भूकम्प, एक सयभन्दा धेरै घाइते
काठमाण्डाै - जापानमा ७ दशमलव १ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । त्यहाँको स्थानीय समयअनुसार गएराति ११ बजेर ८ मिनेटमा फुकुसीमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको हो । प्रशान्त महासागरको ५४ किलोमिटर गहिराइमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गए पनि सुनामी आउन सक्नेबारे भने कुनै चेतावनी दिइएको छैन । सुनामी अर्थात् समुद्री छालको खतरा नभए पनि अबको एक हप्तासम्म ठूला पराकम्प आउन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन त्यहाँको मौसमी विभागले आग्रह गरेको छ । भूकम्पका कारण अहिलेसम्म जापानमा १ सयभन्दा धेरै व्यक्ति घाइते भएका छन् । भूकम्प जाँदा भाग्...
इन्डोनेसियामा शुक्रबार गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ८०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।भूकम्पका कारण अरु १५ हजार मानिस विस्थापित समेत भएको अधिकारीहरुले शनिबार जानकारी दिएका छन् । देशको पश्चिम सुलावेसी प्रान्तमा ६.२ म्याग्नीच्युडको भूकम्प गएको हो ।भूकम्पपछि सयौँ घर तथा भौतिक संरचनाहरुमा क्षति पुगेको अधिकारीहरुले जनाएका छन ।भूकम्पमा परी गम्भीर घाइते भएकाहरुलाई अस्पतालमा उपचार गराइएको छ भने सामान्य घाइतेहरुको सङ्ख्या धेरै भएकाले उनीहरुलाई अस्पताल बाहिर नै उपचार गरिएको छ । भूकम्पले सवैभन्दा धेरै मामुजु स
इन्डोनेसियामा ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प, कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु
इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुमा शुक्रवार बिहान ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि २६ जनाको मृत्यु भएको छ र सयौंजना घाइते भएका छन् । बीसौं घर र एक ठूलो अस्पताल क्षतिग्रस्त भएका छन् । मामुजु शहरमा भूकम्प आएको इन्डोनेसियाको विपत नियन्त्रण निकायले जनायो । भूकम्प जम्मा १८ किलोमिटरको गहिराइबाट शुरू भएको थियो । उद्धारकार्य चलिरहेको छ । भूकम्पपछि अनेकौं परकम्पहरू आएका थिए । विपत व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रादित्य जातिले दुई हजार स्थानीयलाई उक्त क्षेत्रबाट अन्तै सारिएको बताए । तीमध्ये केही अस्था...
क्रोएशियामा शक्तिशाली भूकम्प, ७ जनाको मृत्यु, सयौं घाइते
काठमाडौं । क्रोएशियामा मंगलबार राति भूकम्प जाँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने अरु कैयौं घाइते भएका छन् । ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण ठूलो परिमाणमा भौतिक क्षतिसमेत भएको छ । पेट्रेनियाका मेयरका अनुसार सहरको करिब आधा भाग ध्वस्त भएको छ र मानिसहरूलाई भग्नावशेषबाट निकालिँदै छ । भूकम्पको प्रभाव क्रोएशियाको राजधानी जाग्रेब, छिमेकी बोस्निया र सर्वियाका साथै इटलीसम्म महसुस गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार एक जना महिलालाई भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरिएको छ । २० हजार मानिसको बसोबास रहेको पेट्रेनिया सहर अब असुरक्षित रहेको त्यहाँका प्रधानमन्त्री आन्द्रे प्लेनकोभीच जनाएका छन् । छिमेकी सहर सिसाकमा पनि मानिसहरू घाइते भएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारक एचआरटीले स्थानीय अस्पतालहरूलाई घाइतेहरूको उपचार गर्न गाह्रो भएको जनाएको छ । केही घाइतेलाई शल्यक्रियाको आवश्यकता रहेको बताइएको छ । जर्मन रिसर्च सेन्टर फर जीओसाइन्सेसका अनुसार स्थानीय समय अनुसार ११ बजेर १९ मिनेट जाँदा भूकम्प आएको हो । पेट्रेनिया पुगेका प्रधानमन्त्री आन्द्रे प्लेनकोभीचले भने, ‘एक जना बालिकाको मृत्यु भएको खबर हामीसँग छ। के कति हताहत भए भन्ने बारे थप सूचना छैन ।’ ‘सहयोगका लागि सेना आएका छन्। यहाँ बस्न असुरक्षित भएको हुँदा हामीले केही मानिसहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उनले थपे ।